Yini ukuguqulwa okushisayo, ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi kuthinta kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
E-troposphere, amazinga okushisa ancipha njengoba sikhuphuka phezulu. Ngakho-ke, kuvame kakhulu ukuba kubande ezindaweni ezisezintabeni kunasolwandle. Kodwa-ke, kunezimo ezithile zasemkhathini ezenza ushintsho kule gradient olwenza ukuthi lubuyiselwe emuva. Kuyaziwa njenge inversion ezishisayo. Kuyinqubo lapho izinga lokushisa likhuphukela phezulu.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yikuphi ukushintshwa kwe-thermal, ukuthi kuvela kanjani nokuthi kuhlobene kanjani nokungcola komoya.
1 Kuyini ukushintsha okushisayo
2 Kwakhiwa kanjani ukushintsha kwe-thermal
3 Kungani kwenzeka
4 Ukuguquka kuthinta kanjani ukungcola
Kuyini ukushintsha okushisayo
Kuyinqubo lapho izinga lokushisa lenyusa ukuphakama. Okungukuthi, ezindaweni eziphansi kakhulu zedolobha, ngokwesibonelo olwandle, siyathola amazinga okushisa aphansi kunokuthi sikhuphuke intaba. Kuphambene nalokho okujwayele ukwenzeka.
Lokhu kuguquka okushisayo kungenxa yezimo ezithile ezikhethekile lapho izingqimba zomoya obandayo zehla futhi zihlale zizinzile. Masikhumbule eminye imiqondo eyisisekelo yamandla asemkhathini. Lapho kunama-anticyclone umoya wehla usuka ezingqimbeni eziphakeme futhi uma kunezivunguvungu wenza okuphambene. Sebenza ngendlela yakho kuze kube yizendlalelo eziphakeme. Ukuguqulwa okushisayo kwenzeka ezimweni ze-anticyclone nangokuzinza okukhulu komoya.
Ekushintsheni okushisayo siyabona ukuthi umoya obandayo osuka ezingqimbeni ezingaphezulu wehlela kanjani ezingqimbeni ezingezansi eziseduze nobuso bomhlaba. Lokhu kuhamba phansi komoya obandayo kwaziwa njengeSubidence. Kukho konke lokhu kwehla, umoya ucindezelwa kakhulu, ukwandisa umfutho wawo nokwandisa izinga lokushisa kwawo. Ngaphezu kwalokho, ilahlekelwa umswakama ngakho-ke awekho amafu. Siyabona ukuthi, lapho ifinyelela phezulu, iyanweba futhi yehlukane. Lokhu kwenza ukuthi isabalale phezu kwawo wonke umhlaba kudala izingqimba zokuzinza.
Kwakhiwa kanjani ukushintsha kwe-thermal
Ukunyukela phezulu kwenqwaba yomoya ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke kuyavinjelwa futhi nakho kungenzeka ukungazinzi. Ukungabikho kwalokhu kuhamba komoya kuvimbela uquqaba lwomoya lwamazinga okushisa ahlukene ekuxubeni. Lapho kufika ubusuku, umhlaba ulahlekelwa yizinga lokushisa elifinyelele kulo emini ngenxa yemisebe yelanga ngokushesha okukhulu. Lokhu kushisa kudluliselwa emoyeni oxhumana nomhlabathi. Umoya obandayo usinda kakhulu futhi ufakwa ezansi kwezigodi ngakho-ke, ngezikhathi zasekuseni amazinga okushisa ayabanda.
Kumele kukhunjulwe ukuthi kulezi zimo zokuguquguquka okushisayo umoya wehla usuka ezingqimbeni eziphakeme futhi ufudumale phezulu ukuze umoya ofudumele uhlale phezu komoya obandayo. Lokhu kubangela ukuthi ipulaki noma isivalo sakheke. Njengoba ukunyuka okuphezulu komoya kuvinjelwe ngokuphelele ngoba ayikho imimoya enikezwe ukuzinza okukhulu, lezi zinqwaba zezici ezahlukahlukene azihlangani ngakho-ke kwenzeka inversion yokushisa.
Into ejwayelekile kakhulu ukuthi ukushisa komkhathi kuyancipha ngokuphakama, kepha kulokhu kukhona ukuguqulwa okushisayo.
Ukuze kwenzeke ukungena ngaphakathi okushisayo, izimo ezahlukahlukene kufanele zenzeke. Ebusuku, umhlaba uphola ngokushesha, ulahlekelwe yikho konke ukushisa obukuqongelele emini. Lolu ungqimba lomoya lunezinga lokushisa eliphansi kunalelo eliphakeme ngokushesha. Lokhu kusho ukuthi umoya unamandla ahlukene, okubavimbela ekuxubeni. Njengoba ilanga livela futhi liqala ukulungisa ukuguquguquka okushisayo futhi kunuka ukufudumeza ubuso bomhlaba, kubuyise izimo ezijwayelekile.
Lesi simo senzeka ngokulingana okukhulu ezindaweni ezigodini njengoba ukupholisa ngemisebe kukhulu. Uma kunomehluko omkhulu phakathi kwamazinga okushisa emini nasebusuku, kungenzeka kakhulu ukuthi kube nokuguquka okushisayo. Uma kukhona ukuguquguquka okushisayo kubonakala kalula. Lokhu kungenxa yokuthi inkungu noma intuthu ivame ukugxila ezindaweni eziseduze nobuso bomhlaba. futhi welula nendawo. Kuvame kakhulu ukwenzeka ezindaweni zasolwandle nasezigodini. Imvamisa kwenzeka ezindaweni lapho, ngenxa ye-morphology yayo, ukujikeleza komoya okujwayelekile kunzima.
Ukuguquka kuthinta kanjani ukungcola
Sishilo ukuthi ngesikhathi senqubo yokuguqula ukushisa kukhiqizwa ungqimba lokuzinza komkhathi ebusweni bomhlaba. Lolu ungqimba lwenziwe ngomoya opholile ojiyile futhi uhlala kusendlalelo esingezansi. Lokhu kwenza kube nzima ukuxuba izingqimba ezimbili zomoya ezinamanani ahlukene lapho zinamazinga okushisa ahlukene. Ngakho-ke, kulula impela ukuphetha ngokuthi omunye wemiphumela emikhulu ongabangelwa ukungena kwe-thermal yilokho ukungcola kubhajwe ebusweni bomhlaba ngaphandle kokuhlakazeka kumkhathi.
Imvamisa, umoya uvame ukukhuphuka futhi usivumele ukuthi sisabalalise ukungcoliswa komoya kusuka ezindaweni eziphansi. Kodwa-ke, ekuguqulweni okushisayo, umugqa ophakeme wokushisa usebenza njengesembozo phezu komoya obandayo oxhumana nomhlabathi. Yilapho kugcinwa khona inani elikhulu lokungcola. Omunye wemiphumela esheshayo yintuthu. Lolu ungqimba lokungcola lungabonakala kusuka ebangeni elingamakhilomitha ambalwa futhi luvame ukuholela ekwehleni kwamazinga ekhwalithi yomoya.
Imiphumela empilweni yomuntu yalesi simo ihunyushelwa ekukhuleni kokubonisana kwezokwelapha ngenxa yezinkinga zokuphefumula nezenhliziyo. Kumele kucatshangwe ukuthi ukuphefumula umoya ongcolile ikakhulukazi uhlasela amaqembu anobungozi njengabantu abagulayo, asebekhulile noma izingane. Futhi ukuthi amazinga e-nitrogen dioxide ne-sulfur dioxide agcinwa ngezikhathi zokushintshwa okushisayo. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya zosayizi we-micron eziyi-10 no-2.5 ​​zigxilwe futhi zingene kwi-alveoli yamaphaphu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokwenzeka kwe-inversion eshisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukuguqulwa okushisayo